Tsy milamina i Toamasina : Nisy nanafika ny « Accès Banque » Bazary kely – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2019 → mai → 9 → Tsy milamina i Toamasina : Nisy nanafika ny « Accès Banque » Bazary kely
Tsy milamina i Toamasina : Nisy nanafika ny « Accès Banque » Bazary kely
Redaction Midi Madagasikara 9 mai 2019 2 Comments
Ny alarobia teo tokony tamin’ny 11ora antoandro dia notafihana andian-jiolahy enina nitondra basy basy vita gasy roa ny « Accès Banqie » Tanambao I, Bazary kely Toamasina. Ny telo lahy tamin’ireo andian-jiolahy no niditra ny banky raha niandry tety ivelany kosa ny telo ambiny niaraka tamin’ireo moto telo nentin’izy ireo. Tsy fantatra mazava noho ny tsy fahazoam-baovao avy amin’ity banky ity ny sandan’ny vola very na teo amin’izy ireo na tamin’ireo mpanjifany niharan’ny fanafihana ; fa vao naheno ny anjombona tao anatin’ilay banky ireto andian-jiolahy dia nitsoaka avy hatrany. Raha nanao ny fanarahan-dia ny polisy raha tonga ara-potoana taorian’ilay anjombona naneno, dia raikitra avy hatrany ny fanarahana ireto andian-jiolahy. Maty teo akaikin’ny CEG Ratsimilaho ny moto iray nentin’ireto andian-jiolahy ireto ka navelan’izy ireo teo, izay fantatra fa moto avy nangalarina ihany koa. Tena misy ifandraisany amin’ireo andian-jiolahy enina izay mbola tsy tratra tamin’ny fanafihana ny tranombarotra mpamongady « Fortunah » tao Tanambao V ireto andian-jiolahy ireto. Nanamarina izany ny basy nentin’izy ireo, ny fanamiany, ary ny tsy fanaovan’izy ireo saron-tava nandritra ny fanafihana ny « Accès banque » ity. Ho an’ny mpitandro ny filaminana dia mihantsy azy ireo ireto andian-jiolahy ireto, ary tena karazana orinasa kely amin’ny fanaovana asan-jiolahy koa izy ireo amin’ny fanafihana ataony. Na izany tsy milamina i Toamasina tato ho ato satria taorian’ny fakana an-keriny dia mirongatra izay tsy izy ny fanafihana mitam-piadiana tao anatin’ity taona 2019 ity, izay saika misy tratra hatrany isan-kerinandro eto Toamasina. Manome toky ny vahoaka anefa ny mpitandro ny filaminana fa hanao ny ezaka rehetra amin’ny fisamborana azy ireo, saingy miantso fiaraha-miasa amin’ny vahoaka sy ny andrimasom-pokonolona amin’ny fanomezam-baovao matotra sy marina azy ireo.
tsito Rabe 9 mai 2019 at 11 h 51 min · Edit
ROdrick/// ra lasa tampoka ny sainao otran oe apirisiana mits ny panao ratsy am zao hanao fanakorotanana !possible ko nef zn ahiahy zn ! ny famahana ny olana sy ady am tsy fandriam-pahalemana efa ita fa manao izay tratran mits n pitandron filamina am zao ftoana !ra fahantrana no mapirongatra azy na tsy fahampian ny asa ,ny fanjakana foibe efa napanatena fa hamongotra io ary hamorona asa fivelomana ny vahaoaka malagasy tsy an’asa !
Rodrick 9 mai 2019 at 10 h 48 min · Edit
Ny mpitandro ny filaminana dia EFA NANOME TOKY foana nanomboka ny taona 2010 fa tsy tafa e..Mbola io eo foana ry zalahy.Fa inona no antony ? Iza no tokony mandray fanapahankevitra tena mety mba tsy hitohizan’ny « fanomezantoky tsy ho tanteraka lava zao » ?..tsy manome tsiny an’ireo mpitandro ny filaminana izay tena manao ny asany tokoa aho..fa tena manome tsiny kosa an’ireo mpitondra izay tsy mbola mandray izay andraikitra tena tokony hatao na dia sarotra aza.Ravalomanana ihany no natokisako mahay sy mahasahy mandray ny andraikitra tena mety @toy izao.Dommage, il n’est plus l’homme de la situation